Ny Alto's Adventure mahafinaritra dia hita ao amin'ny Mac App Store | Avy amin'ny mac aho
Iray amin'ireo lalao nahasarika ny sain'ny ankamaroan'ny tontolon'ny lalao video ho an'ny fitaovana finday sy lavitra ny famokarana lehibe ny Alto's Adventure, lalao iray nahavita nisarika ny sain'ny mpampiasa an-tapitrisany maro miaraka aminy sary, fahatsorana ary filalaovana. Vao tsy ela akory izay dia nahatratra ny tontolo iainana Android. Anjaranao Mac izao.
Raha ny filazan'ny mpamolavola, Snowman, satria navoaka ho an'ny iOS ny kinova voalohany amin'ity saga ity dia naniry foana ny handefa kinova ho an'ny Mac izy ireo, saingy mialoha ny kinova ho an'ny tvOS izy ireo. Miaraka amin'ny famelabelarana ny volana jona lasa teo an'ny Mac App Store nohavaozina, nino i Snowman fa tonga ny fotoana ary nanala ny kaody ho an'ny kinova Mac. Azo alaina ao amin'ny Mac App Store izao ity kinova ity.
Ao amin'ny Alto's Adventure, hiaraka amin'i Alto sy ny namany izahay miroso amin 'ny lanezy feno fankahalana tsy manam-petra, mandeha mamaky ny havoana Alpine mahafinaritra, ala taloha ary rava sisa. Mandritra ny dia dia tsy maintsy hamonjy lelafo tsy voafehy isika, hialana amin'ny tampon-trano, hitsambikina eny amin'ny lohasaha ary haneso ireo loholon'ny tendrombohitra raha mbola miatrika ny fiovan'ny cline sy ny haitao isika.
Endri-javatra momba ny Adventure an'ny Alto ho an'ny Mac
Mifanaraka amin'ny Game Center, izay hahafahantsika mahafantatra ny isa avo indrindra, ny halavirana ary ny combo faran'izay tsara vitanay.
Vokatry ny jiro sy ny toetr'andro.
Mora hianatra rafi-pitaka fa tsy mora fehezina.
Tanjona 180 samihafa izay tsy maintsy resentsika.
Misafidiana amin'ireo snowboarders enina tsy manam-paharoa, samy manana ny fahaizany sy ny toetrany.
Miaraka amin'ny akanjo elatra dia hahazo mavitrika lalao vaovao isika.
Ny mozika, toy ny feo, dia noforonina mba hanomezana traikefa manodidina lalina, noho izany dia tsara ny mampiasa headphone.
Mifanaraka amin'ny iCloud. Amin'izany no ahafahantsika manohy milalao amin'ny iPhone, iPad na Mac na taiza na taiza nijanonanay.
Alto's Adventure dia manana vidiny ao amin'ny Mac App Store 10,99 euro.
Alto's Adventure€ 9,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Games » Ny Alto's Adventure mahafinaritra dia hita ao amin'ny Mac App Store